नबराज बिक का आमाबुवाको काठमाडौमा रु*वाबासी ! सडकमा छट*पटाउदै मागे न्या’य, पा’पीहरुले मेरो छोरा मा*रे (सहयोग स्वरुप सेयर गराै) | Public 24Khabar
Home News नबराज बिक का आमाबुवाको काठमाडौमा रु*वाबासी ! सडकमा छट*पटाउदै मागे न्या’य, पा’पीहरुले...
नबराज बिक का आमाबुवाको काठमाडौमा रु*वाबासी ! सडकमा छट*पटाउदै मागे न्या’य, पा’पीहरुले मेरो छोरा मा*रे (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
नबराज बिक का आमाबुवाको काठमाडौमा रु*वाबासी ! सडकमा छट*पटाउदै मागे न्या’य, पा’पीहरुले मेरो छोरा मा*रे
गत भदौ १४ मा दुई ठाउँको सुरुङ निर्माणका लागि पीक्यूको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा सहभागी कम्पनीको प्रस्ताव गत असोज १४ मा खोलिएको थियो । ‘त्यसपछि पीक्यूका लागि राखिएको मापदण्डबारे भदौ ३० मा छलफल गरिएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जसमा २१ निर्माण कम्पनी सहभागी थिए, केही कन्फ्युज भए छलफलमा राख्न भनिएपछि सबैले चित्त बुझेको बताएका थिए ।’
सेनाले गरेको यो खुला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक थापाले बताए । यसमा योग्यता पुगेका नेपाली वा विदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउँछन् । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार पहिलो प्याकेजका लागि करिब २७ अर्ब र दोस्रो प्याकेजका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अहिलेको खरिद ऐनले सर्ट लिस्टिङमा एउटा मात्र निर्माण कम्पनी परे पनि बोलपत्र अस्वीकार नहुने व्यवस्था गरेको पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौलाको भनाइ छ । ‘तर यसमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, प्रतिस्पर्धा नभएपछि मिलेमतोको सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा राज्यले प्रतिस्पर्धाबाट पाउने लाभ पाउँदैन, कम मूल्यमा काम हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, अब नहुने भयो ।’
सबैले मापदण्ड पूरा नगरेकाले ६ वटा सम्मलाई ‘सर्ट लिस्ट’ मा राख्न नसकिएको सेनाका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । सर्ट लिस्टको मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी जम्मा दुई मात्र भए,’ उनले भने । उनका अनुसार यति गर्दैमा ठेक्का पाउने भने निश्चित हुँदैन । छानिएका कम्पनीलाई बिड डकुमेन्टमा डिजाइन र बिल अफ क्वान्टिटी (बीओपी) को डकुमेन्ट दिइन्छ ।
सर्ट लिस्टिङमा परेपछि निश्चित समय दिएर लागत अनुमानअनुसारको बिड डकुमेन्ट दिइनेछ । यसरी दिएपछि उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का भएकाले ४५ दिनभित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । ‘त्यसको पनि मूल्यांकन हुन्छ, सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि हामीले सूचना दिएर सम्झौता गरी मोभिलाइजेसन पेस्की रकम दिनेछौं,’ उनले भने, ‘कम्प्रोमाइज गरेर ५/६ वटा कम्पनीलाई समावेश गर्ने कि जसले मापदण्ड पूर्ण रूपमा पूरा गरेको छ, उसैलाई छान्ने भन्ने थियो । तर नियमअनुसार दुई कम्पनी मात्र आएपछि तिनैलाई छानेका हौं ।’ सूचीकृत हुन नसकेकाहरूलाई ‘के–के कारणले नभएको’ भन्नेबारे पत्र पठाइने उनले बताए ।
सेनाले द्रुतमार्गको २०७४ जेठबाट निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । अहिलेसम्म यसको निर्माण प्रगति १६ दशमवल २१ प्रतिशत छ । मुख्य रूपमा रहेको सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म दुवैको ठेक्का भएको छैन । द्रुत मार्गको महादेवटार ३ दशमलव ३५५ किमि, धेद्रे १ दशमलव ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ ।
२०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि तोकिएकै समयमै आयोजना सकिने देखिँदैन । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । ७२ दशमलव ५ किमि दूरी रहेको उक्त मार्गमा आयोजनामा ६ दशमलव ४१ किमिका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै १० दशमलव ५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । माटो काट्ने र पुर्नुपर्ने सडकको दूरी भने ५५ दशमलव ५ किमि छ ।
Previous articleइन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र रबिना बसेल बीच चल्यो क*डा दोहोरी,कसले जिते? कृष्ण कंडेलनै च*कित भए
Next articleकुटो कोदालो गरेर गणेशले पत्निलाई जागिर खाने बनाइदिए गणेशले, बुडेस्कालमा पत्निले धोका दिएर हिँडिन्